Fannaanada Khadra Daahir Cige Oo Ka Hadashay Wiil 15 Sannadood Oo Xadhig Ah Loogu Xukumay Hees Ay Qaado Oo Uu Ku Qoray Facebook - Jigjiga Online
HomeDhaqankaFannaanada Khadra Daahir Cige Oo Ka Hadashay Wiil 15 Sannadood Oo Xadhig Ah Loogu Xukumay Hees Ay Qaado Oo Uu Ku Qoray Facebook
Fannaanada Khadra Daahir Cige Oo Ka Hadashay Wiil 15 Sannadood Oo Xadhig Ah Loogu Xukumay Hees Ay Qaado Oo Uu Ku Qoray Facebook
Hargeysa (Jigjigaonline) – Fannaanada Soomaaliyeed ee Khadra Daahir Cige ayaa farriin u dirtay wiil Soomaali ah oo hees ay iyadu leedahay oo uu ku qoray bartiisa Facebook ku galay jeel, kaas oo muddadii uu xidhnaa la marsiiyey ciqaab adag.
Cabdiwali Maxamed Cumar ayaa waxa laga soo qabtay goob uu ka shaqaynayey oo ku taalla degmada Gallaadi, waxaana la saaray maxkamad ku xukuntay 15 sannadood oo xadhig ah, waxaana loo dhaadhiciyey jeelkii ciqaabta iyo cadaabta ifka ee Jeel Ogaadeen.
Warbaahinta Jigjigaonline.com ayaa toddobaadkii hore qortay warbixin si weyn looga akhristay geyiga Soomaalida oo dhan, taas oo inta badan Website-yada Soomaalidu kasii qaateen, waxaanay ku saabsanayd Qisadii Xanuunka badnayd ee Cabdiwali soo martay intii uu Jeel Ogaadeen ku xidhnaa iyo qaabkii ay Heesta Khadra Daahir sababta ugu noqotay inuu galo hoyga ciqaabta. Muddadii uu ku jiray Jeel Ogaadeen, waxa uu muwaadinkan Soomaaliyeed soo maray tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha, waxaana la garaacayey habeen iyo maalinba, iyadoo mar walba la weydiinayey ujeeddada uu ka lahaa heesta ay fannaanaddu qaaddo oo uu bartiisa Facebook ku qoray.
Cabdiwali kuma koobnayn dhibaatada xadhigga, tacaddiga iyo ciqaabta Jeel Ogaadeen ka dhacday, hase yeeshee waxa sida xoolaha loo gawracay boqollaal qof, kuwo lagu dhex-deldelay jeelka, halka kuwo kalena ay naftu ka baxday iyadoo la garaacayo. Nasiibaabu lahaa isagu, sababtoo ah, isaga oo nool ayuu cadaabtaas kasoo baxay markii xukunka laga tuuray Cabdi Iley, laakiin wali waxa uu la ooyayaa xasuusaha murugada leh iyo nabarradii kasoo gaadhay halkaas oo riiqdoodu aanay ka hadhaynin inta uu nool yahay.
Haddaba warbaahinta Jigjigaonline.com ayaa waxay la xidhiidhay fannaanadda Khadra Daahir Ciga oo ku sugan magaalada Hargeysa, waxaanay uga xog warrantay waxa ay kala socoto sheekada Cabdiwali ee shabakaddani baahisay.
Khadra Daahir waxay u sheegtay Jigjigaonline inay akhrisatay qisada wiilkan oo ay aad uga murugootay, waxaanay farriintay Farriin dareen leh, iyadoo xustay inay aad uga damqatay dhibaatada soo gaadhay Cabdiwali oo kaliya heesteeda facebook ku qoray.
Waxa kale oo ay Khadra Daahir ka hadashay tacaddiyadii maamulkii hore u geystay dadka Soomaalida ah, gaar ahaan kuwa Dawlad Deegaanka oo xasuuq, jidh-dil, diin baabi’in, hanti-boob, kufsi iyo wax kasta oo damiirka nool uu diidayo iskugu jiray.
“Eeddo, Maalin dhoweyd ayaan arkay waxa ku dhacay wiilkaas. Waa wax lala yaabo oo aad looga murugoodo.” Ayey tidhi Fannaanada Khadra Daahir.
Fannaanaddu waxay intaas kaddib farriin u dirtay Cabdiwali iyo dadkii kale ee dhibaatadu kasoo gaadhay maamulkii hore, waxaanay tidhi: “Waa ayaan darro in hees uu facebook ku qoray dhibaatada intaa le’eg kasoo gaadho, waanan ka xumahay. Waan la socdaa waxyaabaha kale ee ka dhacay dalka iyo dhibaatada soo gaadhay shacabka, dhamaantoodna aad ayaan uga xumahay.”
Riix 2 si aad u wada akhrisato warbixinta